Dawladdaha Hoose Ee Soomaliland W/Q: Hibo Ciise | WAJAALE NEWS
Dawladdaha Hoose Ee Soomaliland W/Q: Hibo Ciise
Muwaadin aqoon intee le’eg baad u leedahay dawladda hoose ee degmadaada?. Waa maxay xidhiidhka idinka dhexeeyaa? Waa maxey waajibaadka ay tahey iney kasoo baxaan xildhibaanada dawladda hoose ee Degmadaadu? Maxaa adiga kugu waajib ah si ay u shaqeyso dawladda Hoose ee magaaladaadu? Ma taqaanaa shaqada Duqa(Mayor)/ku xigeenkiisa, Xoghayhaha, Guddiga fulinta, Guddiga Joogtada ah & guud ahaanba xildhibaanada Gollaha Deegaanku? Ma taqaanaa adeegyada loo baahan yahay inay qabato dawladda hoose ee Degmadaadu? Haddii aad saluugto wax qabadka xildhibaanadii aad soo dooratey awoodaada maku kala diri kartaa? Wali ina dib ma u eegtay xeerarka la xidhiidha Dawladaha Hoose si cilmiyeysana ma ugu dabaqday waaqaca jira? Horumar intee le,eg bay ku talaabsatey degmadaadu tobankii (10) sanadood ee u danbeeyay?
Waxay ahayd in ku dhawaad soddomeeyahaa sannadood (30 sannadood) ay wax la taaban karo qabsoomaan. Dhakhtar inooma kordhin “ganacsiyada gaarka loo leeyahay ka hadli maayo”, iskuul inooma kordhin, waddooyin inooma kordhin, biyo ha sheegin, Nalka isaga hadalkiisa daa. Hadday kordheena waxay ku kordheen waa mucaawimooyinka shiisheeye oo leh hab xisaabeed mashaariicdooda lagu bixiyo kuna khasban yihiin gollaha deegaanka ee degmadu inay soo gudbiyaan xisaab celin. Kuwaasi oo aan baahiyaha bulshadeenu dhinacna kaga dhaceyn.
Dastuurka qaranka JSL iyo xeerarka ka sii farcama oo uu ugu balaadhan yahey xeerka ismaamulka Gobollada & Degmooyinka JSL Xeer Lam 23 waxa ay si fiican u qeexayaan dhamaanba su,aalaha kor ku xusan. Qodobada muhiimka ah uunbay halkan ku taaban doonaa balse waxaa iga soo jeedin ah in la akhriyo dadkuna isku baraarujiyaan in ay ogaadaan xeerarka & shuruucda dalka guud ahaan.
Marka ay (3) kalfadhi oo is xiga sabab la’aan, Degmooyinka Darajada “A” & “B” fadhiyadoodu u qabsoomi waayaan. Degmooyinka Darajooyinka C, & D hadii 4 Kalfadhi oo isku xiga sabab la’aan u qabsoomi waayaan.
4.Marka dadweynihii soo doortay ee Degmooyinka Darajada “A” (5,000) Shan Kun oo Qof Maxkamadda Gobolka iska diiwan galiyaan kuna hor saxeexaan, soona jeediyaan in la kala diro Golaha sidoo kale Degmooyinka Darajooyinka “B” “C” & “D” na waa 2000 oo Qof.